လေဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတိ (သုိ့) အောင်ကျူးနှင့် နှစ်တစ်ထောင်အမြုတေလေပုတ်ထုတ်ဆေး – အပိုင်း (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » လေဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတိ (သုိ့) အောင်ကျူးနှင့် နှစ်တစ်ထောင်အမြုတေလေပုတ်ထုတ်ဆေး – အပိုင်း (၃)	30
လေဘုရင်၏အတ္ထုပ္ပတိ (သုိ့) အောင်ကျူးနှင့် နှစ်တစ်ထောင်အမြုတေလေပုတ်ထုတ်ဆေး – အပိုင်း (၃)
Posted by ဇီဇီ on Mar 12, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Entertainment, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 30 comments
လူအများလည်းကျိတ်ကျိတ်တိုး စည်ကားလျှုက် ………
စကားပြောသံ အော်ဟစ်သံ တို့လည်း ဆူညံနေသည် ။ ။
နေရာကားးး ဂဇက်ကျေးရွာ၏အလယ် ဘောလုံးကွင်းတွင်ဖြစ်သည် ။
ဂဇက်ကျေးရွာတွင်း ပွဲတော်ကျင်းပ နေခြင်းပေလော ???
ဤသို့ဆိုလျှင် အဘယ်သောအကြောင်းဖြစ်လေသနည်း ???
အကြောင်းမှာ “အန်ကျော့လော်အောင်ကြူး” မှ ရွာသူားများအားစိန်ခေါ် တိုက်ခိုက်နေခြင်းပင်ဖြစ်လေသည် ။
“” ဟေ့ ဆိတ်လိုလူတွေ သတ်တိရှိရင် ထွက်ခဲ့ ကြောင်တန်းစားပျက်တစ်ဆယ့်ရှစ်ကွက်သိုင်းအစွမ်းသိစေရမယ် !!!!
အိယားးး မိညောင် င်င်င် … ဝု ဝုစ် …… “”.
အောင်ကြူးမှာ အလွန်အမင်းလေထွားသူဖြစ်လေသည် ။
ထွားပေမပေါ့ …… အွန်သိုင်းလောကမှ နာမည်ကျော်လေရဲမိုးနှင့် ဆရာတူတပည့် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်ကိုးးးး။
နှစ်တစ်ထောင်လေပုတ်ထုတ်ဆေးတော်ကြီးအစွမ်းဖြင့် လေးဆိုးလေပုတ်နံ့များသည်လည်း အတွင်းအားမကောင်းပါက နှာခေါင်းပင် ကန်းသွားနိုင်သည်မဟုတ်ပါလော …………
အောင်ကြူး၏ရှေ့တူရူ၌ “ဗိတိန်ကျွန်းသခင်မကြီး” မှာ“” နားဦးတည့်ရာဓါ်းကွန်ခြာ “” သိုင်းကွက်ကိုခင်းလျှက် ………
ယာဖက်ဘေးတွင် “နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်ဂီ” …… “နှူးဘာလက်ညှိုးသွေးကြောထိုး” သိုင်းကွက်ကိုခင်းလျှက် …………
ဝဲဖက် တွင် “စ,လုံးကျွန်သခင်မလေး ဇာယိခိုင်” မှလည်း “ဘာကာခုနှစ်လွှာသိုင်းကွက်” ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန်အသင့် ……………
နောက်တည့်တည့်တွင်တော့ “တိမ်မဲလက်ဝါး ကျီဖြိုး” မှ “” တိမ်မဲဝိညဉ်ချွေ”” သိုင်းကွက်အား ခင်းလျှက် အသင့်အနေအထားဖြင့် မမှိတ်မသုန်ကြည့်ရှုနေလေတော့သည် ။
ဒုတိယစည်းတွင် ဝန်းရံထားသူများမှာ …
ရေမာလာရဲတိုက်သခင်မ တီအန်အေ ၊
မျက်နှာတစ်ထောင်သိုင်းသမား ကျန်ရွဲ့စီ ၊
ဘာမထီ ဝါးဝူဝေါင်းးး ၊
အော်မေ့ဂိုဏ်းမှ ဒုဂိုဏ်းချုပ် မမာမား ၊
အိုင်ပီဂိုဏ်းချုပ် ယာမွှန်ငြ ၊
တောင်လှေခါးဒူးပျံ ကြီးမိုက် ၊
ကြောင်လက်သည်းသိုင်းသမား ကက်ဖက်ဖက် ၊
လေပြန်လေအံလုံမွန်မွန် တို့သည်လည်း တိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ဖြစ်နေသည် ။
လက်ဝှေ့ကျော်တွံတေး ကဘချော ၊
ရွှင်ပျော်ပျော် ကျန်မာဂ ၊
ဓါးစင်္ကြာ အာဂ ၊
တောင်ပေါ်တောင်ကျော် သန့်မျိုး ၊
မော်ဒန်သိုင်းသမား လင်းဆက်ဆက် တို့ကလည်း ခြံစည်းရိုးပေါ်မှအားပေးလျှက်ရှိလေသည် ။
“အန်ကျော့်လော်အောင်ကြူး” ၏ရှေ့သို့ လူရိပ်တစ်ရိပ် ရောက်ရှိလာခဲ့သည် ။
ထိုသူမှာ အွန်သိုင်းလောကမှ ကာလအတန်ကြာပျောက်ကွယ်နေသော
ယခင်သေလည်ကြောင်ဂိုဏ်းမှ လက်ဝဲရံ ဇီးကွက်မင်း ဖြစ်လေတော့သည် ။
“ဇီးကွက်မင်းအပြုံးမျက်နှာဝင့်ဝင့်” ပင်ဖြစ်သည် ။
“” မဟာလစ်ဗြဲ ဇက်ကြောလွဲ “” သိုင်းကွက်ဖြင့် တဟုန်ထိုးကျော်ကြားလာသူဖြစ်သည် ။
“” ဟေ့ လူတွေ !! တစ်ယောက်နဲ့အများ မတရားမလုပ်ကြနဲ့ !!
ကျုပ်ရဲ့ မဟာလစ်ဗြဲ ဇက်ကြောလွဲ သိုင်းက လူမရွေးဘူးနော ဟွင်းဟွင်းးး “”
ဇီးကွက်မင်း ၏ ကြိမ်းဝါးသံအဆုံးတွင် “လူထူးဆန်းအဖိုးအို ထန်စူး” မှာ ခေါင်းတညိန့်ညိမ့်ဖြင့် ထောက်ခံနေသယောင် ပြုနေ၏ ။
ထိုစဉ် ကောင်းကင်ယံထက်မှ တောင်ပံခတ်သံများ ဆူညံစွာထွက်ပေါ်လာပြီးလျှင် နှစ်တစ်ရာလင်းယုန်ငှက်ကြီးတစ်ကောင် ဝဲပျံ၍ဆင်းသက်လာတော့လေသည် ။
“” ဟာ !! အရှေ့ကျွန်းသခင် ကျောက်စ်မိန်ယူ ပါလား “”
ဝိုင်းရံနေသော လူစုထဲမှ အသံများတီးတိုးထွက်လာသည် ။
ဝိုင်းကြည့်နေစဉ်မှပင် လင်းယုန်ငှက်ကြီး၏ ကျောပေါ်မှ လူထွားကြီးတစ်ဦးဆင်းသက်လာပြီးလျှင် ………
“” အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ … ရွာရဲ့ အရေးကို စိတ်မအေးတာကြောင့် ဂူအောင်းပြီးကျင့်နေတဲ့ “” မီးရှူးသန့်စင် မျက်နှာမြင်သိုင်း “” ကိုတောင် ပြီးဆုံးအောင်မကျင့်နိုင်တော့ဘဲ ပြန်လာခဲ့တာပါလေ ……
ကဲ ကဲ အောက်လမ်းသိုင်းသမားဆိုးတွေအတွက် …
အွန်သိုင်းလောကစည်းကမ်းတွေဘာတွေ စောင့်စည်းမနေပါနဲ့ စုပေါင်းပြီး ဝိုင်းဝန်း သုတ်သင်ကြတာပေါ့ဗျာ …… “”
ကျောက်စ်မိန်ယူ ၏ စကားသံအဆုံးတွင် ……
“” ယ ယ ယားးးးးး စ် “”.
“” အာဝု … မိညောင် “”
“” ဇီးးးးးကွက်က်က် “” စသော မာန်သွင်းသံများ
.သွေးများ ပန်းထွက် ……………
နောက်ဆုံး စာ ရွက် ကုန်ပြီဖြစ်သည်။
မေးရန် အလို့ငှါ ကြည့်လိုက်တော့ ယခင်နေရာတွင်မရှိတော့ချေ။
ထိုင်သွားသောနေရာတွင် ဆေးပေါ့လိပ်တို တစ်ခု ထိုးကြေလျက်!!!!
ဤ ဇာတ်လမ်း မည်သို့ အဆုံးသတ်မည်ကို မည်သူသိအံ့နည်း??
Wow says: ကြောင်ဏှာဂျီး သေဘီပေါ့နော်.. ပျော်ထှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: သိဘူးးး
black chaw says: စာပေ ပြင်ငြာယှင် ဝေဖန်ရေး ဆြာကြီး ဗဠက်ချော ၏ အထူးသုံးသပ်ချက်…။
ဤ သိုင်း ဇာတ်လမ်းကြီးသည် အစ၌ စွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မား၏။
နောက်တစ်ပိုင်း ဘာဖြစ်မလဲ ဟု စောင့် ဖတ်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရ၏။
အလယ် ၌ ဇာတ်လမ်း အနည်း ငယ် ပျောက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့၏။
အဆုံးပိုင်း ၌ သော်ကား မထင်မှတ်ပဲ အဆုံးသတ်ချလိုက်သဖြင့်
စာဖတ်သူတို့ကို မချင့်မရဲ ဖြစ်စေခဲ့ပါ၏။
ဤ သိုင်းဇာတ်လမ်းကြီး ၌ ဇာတ်ကောင်ပေါင်း မြောက်များစွာပါဝင်ကြသည့်အလျောက်
ဇာတ်ကောင် တစ်ကောင်ချင်းစီ၏ စရိုက်ကို ပီပြင်အောင် ပုံဖေါ်ရာတွင်
ထို့ကြောင့် ဇာတ်ကောင်တို့ ၏ စရိုက်အမှန်ကို စာဖတ်သူ မဖမ်းမိပဲ ရှိခဲ့ရပေသည်။
စာရေးဟန်တွင်မူကား သိုင်း ၀တ္ထုတို့၏ ရေးဟန်ကို အပြည့်အ၀ ဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
သိုင်းနာမည်များကလည်း လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စွာဖြင့် စာဖတ်သူတို့ကို
စာရေးဆရာကြီး ခင်ဇော် ၏ လေဘုရင် ၏ အတ္ထုပ္ပတိ သိုင်း ၀တ္ထုကြီးသည်
စာဖတ်သူတို့အား တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးမပြုနိုင်ခဲ့သော်လည်း
ဤကား ဝေဖန်ရေးဆြာကြီး ဗဠက်ချော ၏ သုံးသပ်ချက်ပေတည်း။
ခင်ဇော် says: ခင်ဇော် ရေးတာ ဟုတ်ဘူးးး
ကောက်ရတဲ့ စာဥပါ ဆို!!
အဲ့အဘိုးကြီး ဘယ်ရောက်သွားလဲ လိုက်ရှာ လိုက်ရှာ
ခင်ဇော် says: အဲ့ အဖိုးကြီးကို နာ မသင်ကာဝူးးး
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟယ်သွေးဒေကကြောင်သေးဒေ အဲ့ကြောင်သွေးဒေလား။ ဖြစ်နိုင်လောက်တယ် ဇာတ်သိမ်းရေးပးမယ် ကြောင်သေဘီ ဒါဗြဲ
ခင်ဇော် says: မည်သူက မည်သို့ လုပ်လိုက်သည် မသိ
မွသဲ ( 17082011 ) says: တစုံတအုက အဲ့ တစုံတဦးက ကြောင်ကြီးချက်ကောင်းကို တွယ်ထဲ့တာတဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: .တိန် မော်ဒန်သိုင်းသမား လင်းဆက်ဆက် ဖြစ်ပေတော့သည် တမုံ့…
ဒီ ဇာတ်လမ်းကြီးကို ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကြမလားငင်… ရွာထဲက လူစုံတက်စုံ…နဲ့…
.လောလောဆယ်..ပြေးလိုက်ဦးမယ်…… မော်ဒန်သိုင်းနဲ့.. ဝှစ်စ်ဝှစ်စ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: အာ့ဆို ဘာကာ မင်းသား အရင်ရှာမယ်
ကထူးဆန်း says: ခေါင်းတညိန့်ညိမ့် နဲ့ ခေါင်းငြိမ့် ဆဲ ပါ ဇာယိခိုင် … ငိငိ
ခင်ဇော် says: ခေါင်းညိမ့်တာရပါတယ်။
ဟတ်ချိုးဖြစ်တာလေးတော့ ကု ဦးးး
ဒီ ကလေးမ ကလဲ တန်းလန်းကြီး လုပ်ပြန်ပြီ။
ကွကိုယ် စိတ်ကြိုက် ဇာတ်သိမ်း ခိုင်း တယ်ပေါ့လေ။
လောလောဆယ်တော့ အသံတောင် မပြနိုင်ရှာတဲ့ ဒင်း ကို သနားနေတာ။
သနားစိတ် က သိပ်တော့ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဘယ်လို အသံ နဲ့ ထွက်လာမယ် ဆိုတာ မှန်းထားပြီး။
လူသိမခံ တဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး ကို နာမည်ဖော် ပေးပါဗျို့။ lol:-))))
ခင်ဇော် says: ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးတော့ သများလည်း မမြင်ဖူးဘူးးး
မင်းသားက ရုံး အလုပ် အိမ်ပါ လို့ ဆိုလား ဘာလား
Ko chogyi says: “ဘာကာခုနှစ်လွှာသိုင်းကွက်” ဆိုတာ
pooch says: ဘာဘီကျူးဖြစ်သွားပြီလေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကြောင်ဏှာဂျီး သေပီ… ဒါဘဲ…
ခင်ဇော် says: ပု တို့ အမွန်တို့ က အတော် မစ်တာထားတယ်လာ့??
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . ဇာတ်သိမ်း။
. မြေလျှိုးမိုးပျံ သိုင်းကို အောင်မြင်စွာ ကျင့်သုံးသွားသော မဟာသာမည ဂိုဏ်းချူ ပ် တာဝါတိုင်ဖြို လက်သီးပိုင်ရှင် မိုက်ကယ်တွမ်မီကပ်ပါပု။
. စုတ်ချက်ကြမ်း မနုမရင့် သိုင်းကွက်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ခေါင်ခေါင် ဟုခေါ်သော ဆရာသခင်တစ်ပါး။
.မဟာလစ်ဗြဲ ဇက်ကြောလွဲ သိုင်းကွက်ထက် သုံးဆင့်မျှ ပိုမြင့်သော စူပါလစ်ဗြဲ ဗြန်းဗြန်းကွဲ သိုင်းကွက်ကို အောင်မြင်စွာ လေ့ကျင့်ပြီးစီးသွားသော မရဏအပြုံးသခင် ။
. ယခုအခါ မရဏအပြုံးသခင်သည် မကြာမီ လာတော့မည့် ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွင် သေလည်ကြောင်ဂိုဏ်း အတွက် တပ်ကူခေါ်ရန် အထက်မှ သိုင်းဘိုးအေ မိုက်ကယ်တွမ်မီကပ်ပါပု နှင့် သိုင်းက၀ိ ခေါင်ခေါင်တို့အား အပူတပြင်း ပိုက်စိပ်တိုက် ရှာဖွေနေလေပြီတကား။ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: “စုတ်ချက်ကြမ်း မနုမရင့် သိုင်းကွက်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ခေါင်ခေါင် ဟုခေါ်သော ဆရာသခင်တစ်ပါး”
ရဲ့ မနေ့က စတေးတပ်လေးး
” ဒြပ်စင် ”
စစ် အစိုးရကို ခင်မင်တယ်…..
ဘိန်းမုန့့် ဘဲ စားခဲ့သူက
မုန့် ညှင်းချဉ်ဖတ်နဲ့ဝမ်းရေးဆက်ခဲ့သူက
အမှိုက်ထဲမှာ ရွှေ ရှိမှာ သေချာသလို..
ဒီ တစ်ပွဲမှာ……. သိသာတယ်..။ ။
Wow says: ဒေ၀ဒတ်မှာ အပေါင်းအသင်းများတာတော့ စနစ်ဂျောင့်မဟုတ်လောက်ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အပေါ်က သိုင်းဝတ္ထုလေးလဲ ကောင်းတယ်….။ မချွိကွန်မန့်က ကဗျာလေးလဲ အရမ်းကောင်းတယ်…။ ဟုတ်တယ်…ရွှေကရွှေ အမှိုက်က အမှိုက်ပဲ….။ ဒါပေမယ့်…
Mike says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: ( တောင်ပေါ်တောင်ကျော် သန့်မျိုး ၊ )
ငင် ဘယ့်နှယ် ပါလာရသတုန်း ၊ နေဦးဗျ ၊
ကျုပ် ခြံစည်းရိုးခွထိုင်နေတာ မဟုတ်ဘူး ၊
ဇာတ်လမ်း ၂ အတွက် အလုပ်ရှုပ်တာတစ်မျိုး
ကမ်ပနီရဲ့ ISO 9002 – 2008 လက်မှတ်ရဖို့ ကျုပ်ပါ စာမေးပွဲဖြေ အစစ်တွေ ခံနေရလို့ဗျို့
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: သိုင်းစာစဉ်ကိ သိုင်းစာစဉ်လို့ပဲမှတ်လေဦးမျိုး
padonmar says: ဒီတခါ သိုင်းလောကမှာမိုးပြာဂိုဏ်းမပါပါလား။
အူးစည် says: အော်မေ့ဂိုဏ်းချုပ် အန်တီခင်ဇော် ပရိုဖိုင်ပုံက
၀ါဝါ၀င်းရွှေငယ်ငယ်တုန်းက ရုပ်နဲ့ တထေရာတည်းပဲဗျာ..
အာ့လာပြောတာ…။ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဟေ့ဟေ့။